Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga enothando eFranconian eSwit - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga enothando eFranconian eSwit
Vorra, Bayern, Germany
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguGerlinde
Ilali epholileyo yaseVorra inika umbono wokuba ixesha limile, kufutshane nendawo yogcino lwendalo kukho i-chalet yethu yothando, ekumema ukuba uchithe iintsuku ezimbini zokuphumla. Ngombono omangalisayo ungajonga ngaphezulu kwePegnitztal kwaye uvumele umphefumlo wakho ujingale. Yiba nexesha elimnandi kwi-whirlpool ene-waterfall, ujabulele ukufudumala kwezitulo ze-infrared ze-stone pine okanye uzive nje ulungile kwi-terrace egqunyiweyo kwaye umamele ukutshiza kwentwasahlobo.
Nje ukuba ungene kwi-chalet, ivumba lenkuni. I-chalet yenziwe ngokupheleleyo ngamaplanga aqinileyo avela kumahlathi asekuhlaleni. Kwakhona kusekwa ngolo hlobo. Indalo, ipholile kwaye ishushu.
4.96 · Izimvo eziyi-105
I-Franconian Switzerland iphila kububele kunye nokufudumala kwabantu kwaye idlulisa ukuzola okukhethekileyo kunye ne-cosiness. Ukuba unethamsanqa, uya kufumana utyelelo oluvela kwisalamander ohlala kwipropathi. Iinkamela ezininzi zihlala kwikwari emva kwe-chalet kwaye ziyakuvuyela ukutyelelwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Gerlinde
Akukho mntu kwi-suburbs, unokuchitha ixesha ungaphazanyiswa. Ndingafumaneka nanini na ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Umkhathaleli uhlala malunga nemizuzu eli-15 kude kwaye unokuza kwiimeko ezingxamisekileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vorra